Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Ny Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany indiana dia manendry ny seza fizarana faritra atsimo vaovao
Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany indianina
Ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany indiana dia nanambara ny fanendrena seza seza faritra atsimo vaovao miaraka amin'ny seza vaovao any Kerala, Maharashtra, Uttarakhand, ary Ladakh.
Ny komity mpanatanteraka IATO dia namerina namerina nametraka ny Chapitre isam-paritra sy ny fanjakana IATO mba hanitarana ny elany sy hanamafisana ny fototry ny maha-mpikambana.
Ny filohan'ny IATO dia matoky fa hanampy amin'ny fanamafisana ny ivon'ny mpikambana IATO ho an'i India iray manontolo io.
Ao Uttarakhand sy Ladakh, tsy nisy seza toko hafa tao amin'ireo fanjakana roa ireo.
Tamin'ny fiezahana miharihary hanamafisana ny fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany Indiana (IATO) taorian'ny nandraisan'ny ekipa vaovao azy dia nanendry sefom-paritra ho an'ny faritra vaovao any amin'ny faritra atsimo sy sezaky ny fanjakana ao Kerala, Maharashtra, Uttarakhand, ary Ladakh i IATO.
Taorian'ny fifidianana, ny Komity Mpanatanteraka IATO dia namerina nametraka indray ny IATO Toko isam-paritra sy fanjakana hanitatra ny elany ary hanamafy ny fototry ny maha-mpikambana.
Andriamatoa Sejoe Jose, Tale mpitantana ny Marvel Tours Pvt. Ltd., efa nomena ny andraikitra lehibe kokoa mba hikarakara ny faritra atsimo ary toy izany dia notendrena ho filohan'ny faritra atsimo IATO izay misy Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Andaman Nicobar, Puducherry, ary Lakshadweep. Talohan'izay dia izy no Sefo Toko an'i Kerala. Handray an-tanana an'i Andriamatoa EM Najeeb izay filohan'ny faritra atsimo izy ary nandray anjara betsaka tamin'ny fitomboan'ny IATO any amin'ny faritra atsimo.